Keenista Videos inay daawan kartaa iPad
> Resource > iPad > Sidee u daawan karaa Movies On iPad
Miyaad u doonaysa in ay naftaada ula iPad ah Abaal marin? Ma waxaad si aad u hesho this Christmas? Ma waxa aad ka walwalsan tahay laga yaabo in aadan si uu u daawado filimada on your iPad karo, maxaa yeelay, aad leedahay doonaa dhibaatooyinka si ay u gudbiyaan ama u hagaagsan aad video files in ay aad kombuutarka ka hawlgala Windows? Ama waa sababtoo ah files video ma taageersana ama ku jira codecs leheyn? Waxaan leenahay qaar ka mid ah xal kuu ah, xitaa karaa download ama ku tusaysaa sumcad TV , FREE, si aad u daawato on your iPad!
Si kastaba ha ahaatee, files ugu soo bixi ama diiwaan laga yaabaa in aan la aqoonsan ay iPad ee liiska xakamaynaya ee ay taageerayaan qaabab video. Sidaa awgeed, waxaad u baahan doontaa si loogu badalo faylasha video midkood Habka 1: Iyada oo ah Converter AVI online ama; Habka 2: Converter Desktop .
Habka 1: Online Video File Converter
Habka 2: Desktop Video File Converter
Waxaa jira fursado badan oo uu ka soo xusho, haddii aad jeceshahay inaad ku beddelato video files online. Halkan ah liiska converters online meesha aad isticmaali karto si aad cadaadin, diinta ama free videos si uu u daawado on your iPad. Dhammaan waxa aad u baahan tahay wax xidhiidh ah oo joogto ah oo wanaagsan si ay Internet-ka. No downloads ama rakibaadda loo baahan yahay; laakiin waxaad u bedeli karaan oo keliya mid ka mid file waqti. Waa maxay soo go'ay a yaa ugu Sugan kuwa ka badan si loogu badalo!
Waxaad gali kartaa adiga video files ka folder degaanka halkaas oo files video yihiin kuwa badbaadayaa ama si fudud u jiidi-iyo-hoos u ugu qorto sanduuqa bixiyo haddii feature la karti. Haddii kale, nuqul ka-iyo-paste URL ka video soo dhex galay khaanadda soo bixi jecel aad video clip.
Tan iyo markii ay jirto rakibo ma loo baahan yahay, uma baahnid inaad wax laga walwalo arrimaha waafaqsan nidaamka hawlgalka aad PC ee. Waxaa laga yaabaa inaad si aad u hubiso in converters online aad bixisaa fursad u of qaabab wax soo saarka in aad u baahan tahay dib u ciyaaro si uu u daawado filimada on your iPad.
Si fudud u hubi Habka 2 haddii converters online ma awoodaan inay keenaan ilaa aad ka filayso.
The Wondershare Video Converter Ultimate jaanqaadi u download gal labada PC ka hawlgala Windows iyo Mac. Sidaa awgeed, aad noqon doontaa aw in aad noqon doontaa inaad kala soo baxdo, diinta iyo sidoo kale ku wareejin video files in ay aad Windows PC si uu u daawado ee iPad karin. Just sii wado si ay u soo bixi version maxkamadda ka dibna la hage tallaabo-tallaabo hoose raac (sida diinta ka fudud iyada oo fursad u xaalkaa haddii aad rabto).
Si loo dar aad video files gal interface ah, waxaad karaa jiita in files si toos ah uga soo buugga deegaanka, riix + dar Files icon ama iyada oo loo marayo DVD Load . Ka dib markii in, guji Edit (taas oo ku file kasta Upload sida hoos lagu muujiyey) oo qaadi karaan talaabada 2 wixii faahfaahin dheeraad ah.
Marka laga reebo inay awoodaan inay u jar oo noola aad videos, sidoo kale waxa aad shakhsiyeeyo kara saamaynta dhisay-in sidoo kale dar watermarks ama subtitles. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ku eegaan karo isbedelka-waqtiga dhabta ah!
Gashid intii adigoo inay gacanta xulashada qaab wax soo saarka aad video files, waxaa jira horena ee laguugu sahlo. Just ka hor tago oo caleenta ah ee brand ama model aaladaha aad u loo maqli karo ee Qaabka Output hoos-hoos menu 's. Waa asal ahaan mid fudud sida in, oo dhan aad ka tagay si ay wax qumman hadda waa in guji badalo button. Waxaa aad u tagto, gadaal u fadhiisato oo aad nasato ilaa fariimaha pop-up aad u sheegto in ay ka dhan dhameystiray. Hadda waxaad bilaabi kartaa si aad u daawato filimada ee iPad!
Waxa kale oo aad ka ogaan doonto in ay jiraan laba ka badan oo kala duwan oo sida Gubashada iyo Download on top of interface ka. Sida magacaba ka soo jeedin, aad koobi karo waxyaabaha aad DVD (ma DRM-ilaaliyo) si disc kale oo cusub ama si fudud gubi aad video files gal DVD ama abuuro image ISO ah iyo iwm kale, download aad videos ka goobood geeyo online. Ka dib markii in, si fudud loogu badalo oo lagu wareejiyo gal qaab aad iPad ee ay taageerayaan iyo codec u ah waayo-aragnimo loo maqli filaayo!